Iwe uri pane yakarova runyorwa: China inotyisidzira Taiwan 'vanoparadzanisa'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Iwe uri pane yakarova runyorwa: China inotyisidzira Taiwan 'vanoparadzanisa'
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mumiriri wehurumende yeChina, Zhu Fenglian, akatumira kutyisidzira kuruzhinji kune vanotsigira rusununguko rweTaiwan.
China inotyisidzira vakuru veTaiwan: Avo vanopandukira nyika yekwavo uye kutsvaga kupatsanura nyika vanotarisirwa kuve nemagumo akaipa, uye vanosungirwa kurambwa nevanhu uye kutongwa nenhoroondo.
China inotyisidzira 'kuranga' vatsigiri nevatsigiri verusununguko rweTaiwan.
Taiwan 'vanoparadzanisa' vacharambidzwa kupinda munyika huru, Hong Kong neMacao.
Ma 'separatists' anozoferefetwa kuti ane mhosva here maererano nemutemo weCommunist China.
Mutauriri wehofisi yeChina yeTaiwan Affairs yeState Council, achipindura mubvunzo wevatori venhau maererano nematanho ekuranga vatsigiri vehurumende. Taiwan rusununguko, yakazivisa kuti 'zvinhu zvinopatsanura' zvakadaro zviri parunyoro rweChina uye 'vacharangwa' 'maererano nemutemo.'
Mumiriri wehurumende yeChina, Zhu Fenglian, akatumira veruzhinji kutyisidzira Taiwan vatsigiri verusununguko, vachiyambira kuti avo vari parunyoro rwekurova, pamwe chete nehama dzavo, havazopinda muruwa uye matunhu maviri akakosha ekutonga. Hong Kong uye Macao, uye masangano avo akabatana acharambidzwa kuita chero kudyidzana nemasangano uye vanhu vari panyika.
VaZhu vakawedzerawo kuti vatsigiri vavo pamwe nevemabhizinesi ane chekuita navo vacharambidzwa kuita mabasa ekuita purofiti panyika, pakati pezvimwe zvirango.
"Avo vanopandukira nyika yekwavo uye kutsvaga kupatsanura nyika vanotarisirwa kuve nemagumo akaipa, uye vanosungirwa kurambwa nevanhu uye kutongwa nenhoroondo," Zhu akadaro, achitaura nezvevanotsigira. Taiwan'Kuzvimiririra, kusanganisira mutungamiri weTaiwan, Su Tseng-chang, mutungamiri weLegislative Yuan Yu Shyi-Kun uye Gurukota rezvekunze reTaiwan, Joseph Wu.
Avo vari parunyoro urwu vanozozvidavirira kweupenyu hwese uye vachaferefetwa kuti vane mhosva maererano neCommunist China 'mutemo,' Zhu akawedzera.